Blog Comment box ထည့်နည်း ~ Myanmar Blogger Guide
Blog Comment box ထည့်နည်း
ဒီအချက်ကလေးကတော့ Blog ရေးတဲ့လူတွေအတွက် Comment box ကို Pop-up အနေနဲ့ထားခဲ့ရင်တော့ ကိစ္စမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Post ရဲ့အောက်မှာ Comment box ကိုထားခဲ့ရင်တော့ အခုလိုမျိုးလေး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ Blog တွေမှာမြင်ဖူးကြမှာပါ။ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ပိုစ့်ကို Comment ပေးဖို့အတွက် Post comment ဆိုတဲ့ Buttom ကလေးက မပေါ်ပဲနဲ့ အပေါ်ထိပ်ပိုင်းကလေးပဲပေါ်နေတာကလေးပါ။ ကိုယ်ကတော့ Comment ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ရေးပြီးသွားပြီ ဒါပေမယ့်လည်း အဆုံးသတ်ဖို့အတွက် အဲဒီ ခလုပ်ကလေးက မပေါ်တော့ Comment ကလည်း မရေးဖြစ်တော့ဘူးဖြစ်ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဖြတ်ပြီးတော့ ပြောချင်လို့ပါ။ :) :)
စာဖတ်သူများအနေနဲ့ Blog တစ်ခုမှာ ဖတ်ပြီးသွားရင် Comment ကလေးပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ. ဘာလို့လဲဆိုတော့ မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Comment တစ်ခုက Blog ရေးသားသူတွေအတွက် တကယ့်ကိုအားပါပဲ။ Blog ရေးတဲ့ သူတွေကလည်း ကိုယ့်ရဲ့ Blog ကိုဝင်ဝင်ချင်းမှာ စစ်မိတာကတော့ ကိုယ့် Blog မှာ ဘယ်သူတွေ များ ဘယ်လို Comment ကလေးတွေ ပေးသွားလဲဆိုတာကလေးကို ရှာမိကြပါတယ်။ သီချင်းဆိုတဲ့ လူတွေကျတော့ လက်ခုပ်သံ ရှာစားကြတဲ့ဘ၀ပေါ့ ၊ Blog ရေးတဲ့သူတွေကျတော့လည်း Comment ရှာစားကြတဲ့ဘ၀ပေါ့နော်။ .. Blog မှာမှ မဟုတ်ပါဘူး .. ဥပမာ ။ ။ ဖိုရမ်တစ်ခုမှာ ကိုယ်က Topic တစ်ခု ကို ဖွင့်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်. အဲဒါနောက်တစ်ခါဝင်ကြည့်တဲ့အခါကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ Topic အောက်မှာ ဆွေးနွေးထားတာကလေးရှိစေချင်ပါတယ်။။ အဲဒီ့လိုပါပဲ။ Blog ရေးတဲ့သူတွေအတွက်လည်း Comment တစ်ခုကိုလည်း စောင့်မျှော်နေကြတဲ့ဘ၀ပါဗျာ။။ ရေးနေရင်းနဲ့ ပိုစ့်က Spam ဖြစ်တော့မယ်။ စမှဖြစ်တော့မယ်။ အခုလိုမျိုးပြဿနာကလေးတွေကြုံလာခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ ပြင်ကြည့်ရအောင်ပါ။
၁။ Layout => Edit html အဲဒီ့ကိုသွားလိုက်ပါ။
၂။ Ctrl+F ကိုနှိပ်ပြီးတော့အောက်က ကုဒ်ကလေးကိုရှာလိုက်ပါ။
အဲဒီအထဲမှာမှ အပေါ်က အနီကလေးနဲ့ပြထားတဲ့ 275 ဆိုတဲ့နေရာကလေးမှာ 300 ဆိုပြီးတော့ ထားလိုက်ပါ ခင်ဗျာ.။
၃။ ပြီးရင်တော့ Save templete ပေ့ါနော်။
အဲဒါကလေးကိုလုပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ ။။။ အဆင်ပြေသွားပါပြီခင်ဗျာ။။